OPPO waxay horey u soo bandhigtay muuqaalkeeda 10x-ka ee zoomka si rasmi ah | Androidsis
Eder Ferreno | | Sawir, MWC
Dhowr bilood ka hor in la xayaysiiyay taas OPPO waxay ka shaqeysay 10x tiknoolajiyad indho indhayn ah iyada oo aan tayada la waayin. Ugu dambeyntiina, marka la gaaro MWC 2019, tikniyoolajiyaddan horey ayaa loo soo bandhigay. Nooca Shiinaha ayaa ku yaal magaalada Barcelona, ​​halkaas oo ay ku soo bandhigeen bandhig rasmi ah. Marka hawlgalka tiknoolajiyadaan cajiibka ah horeyba waa loo ogaa, kaas oo ballan qaadaya inuu keenayo horumar badan.
Toddobaad ka hor ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay in OPPO ay soo saareyso tikniyoolajiyaddan rubucii labaad ee sanadkan. Aniga oo tixgelinayna taas horay ayaa loogu soo bandhigay MWC 2019 Si rasmi ah, waxay umuuqataa inay taariikhaha macno samayn karaan. Maxaan ka filan karnaa tikniyoolajiyadan?
Sumadda Shiinaha ayaa leh soo bandhigay taxane ah oo horumarineed ee tikniyoolajiyaddan. Sidan oo kale, iyada oo loo adeegsanayo qalab cusub, marka lagu daro soo bandhigida taxane ah hawlo cusub, waaya-aragnimada soo dhaweynta ayaa si weyn loo hagaajiyay. Khibrad ah in summaddu ballanqaadayso ay ka duwan tahay wax alla wixii aan ku aragnay taleefannada casriga ah. Shaki la'aan, waxay horumar muhiim ah u noqon kartaa OPPO.
Waxaan ka helnaa zoom ilaa toban koror la'aan khasaaro la'aan. Tani waa wax aan ku arki doonno gudaha casriga casriga ah. Marka muhiimadda ay leedahay wey weyn tahay. Kadib usbuucyo kadib warar xan ah oo ku saabsan, waxay rasmi ku noqotay dhacdadan kahor MWC 2019 ee Barcelona. In kasta oo Shiinaha sidoo kale ay ku lahayd dhacdo u gaar ah. Maxay nooga sheegeen tikniyoolajiyadan?
OPPO 10x zoom indhaha
OPPO waxay rabtay inay muujiso isku dhafan ee software iyo qalabka sida dhinaca muhiimka ah ee arrintan la xiriira. Thanks to hagaajinta labada dhinac, waxaa suurtagal noqotay in la fuliyo tikniyoolajiyadan. Shirkaddu waxay ku tiirsaneyd qalab ay hadda ku hayaan maamulkooda si ay awood ugu yeeshaan inay suurtagal tahay soo bandhigida tikniyoolajiyadan.
Nidaamka dareemayaasha ee taleefanka ayaa adeegsanaya nidaamka muraayadaha indhashareerka u eg. Waxay u muuqataa inay leedahay dhumuc aad u yar, oo kaliya 6,6 mm, taas oo ah waxa u oggolaanaya taleefanka casriga ahi ka sii dhumuc weyn xagga naqshadaynta. Wax muhiim u ahaa astaanta, iyo inay awood u yeesheen inay gaaraan, sida ay ku sheegeen munaasabadda. Marka waa arrin muhiim ah, in ugu dambeyn la isticmaalo tikniyoolajiyadan. Haddii kale, mashruuca malaha uusan sii socon lahayn.
10x Lumis la'aan lumis ah iyo xagal ballaaran oo ballaadhan ??? #GabashoWithOPPO? pic.twitter.com/iJUIfD95f5
- OPPO (@oppo) February 23, 2019
Dhinaca kale, xagal ballaadhan 120 darajo ayaa la isticmaalay. Marka lagu daro dareeraha weyn ee 48 MP iyo dareeraha telephoto. Isku-dhafkan wuxuu u oggolaanayaa OPPO inuu daboolo dhererka dhererka u dhexeeya 16 illaa 160 mm. Inkasta oo tani aysan si toos ah uga turjumaynin in qalabka 10x-ka lagu dhaweynayo. Waa iskudhafyada softiweerka iyo qalabka kombiyuutarka ee hubiya in sawirradu aysan lumin doonin tayada, wax ku dhaca dhawaanshaha dhijitaalka ah.
Marka waa horumar weyn oo arimahan ku saabsan. Aag illaa iyo hadda ahaa mid ka mid ah qodobbada daciifka ah ee inta badan noocyada casriga ee suuqa hadda jira. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay xaqiijisay in kamaradda ugu weyn, 48 MP iyo telephoto, la imow xasilinta indhaha oo leh OIS. In kasta oo dareeraha xagal-ballaadhan uusan lahayn. Laakiin, waxay u muuqataa inaan loo baahnayn, sida ay ka sheegeen OPPO. Sababta oo ah nooca sawirrada lagu qaadi doono kaamirooyinka.
Hadda, waxaa haray oo keliya in la sugo taleefannada casriga ah ee ugu horreeya OPPO oo adeegsan doona tiknoolajiyaddan si ay u gaaraan suuqa. Waxaa la yidhi mid ka mid ah kuwa ugu horreeya wuxuu noqon karaa F11 Pro, kaas oo aan ka helayno daadad badan toddobaadyadan. Moodel ay tahay inuu dhowaan soo gaaro suuqa, inkasta oo aynaan hayn wax xaqiijin rasmi ah illaa hadda. Shirkadda ayaa sidaas tidhi moodooyinkeeda koowaad waxay imaan doonaan rubuca labaad inaad yeelato muuqaalkan weyn ee 10x. Laakiin wax macluumaad dheeraad ah nama aysan siinin hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sawir » OPPO waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa zoomkeeda indhaha 10x